12 Xaafadaha Ugu Qabow Yurub | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 12 Xaafadaha Ugu Qabow Yurub
Tareenka Safarka ee Britain, Tareen Travel Czech Republic, Tareenka Safarka Danmark, Tareenka Safarka Faransiiska, Tareenka Safarka Jarmalka, Tareen Travel Holland, Tareenka Safarka ee Hungary, Tareen Safar Talyaani, Tareen safarka Ruushka, Tareenka Safarka Switzerland, Tareen Travel The Netherlands, Tareenka Safarka Boqortooyada Ingiriiska, safarka Europe
Waxaa jira magaalooyin badan oo cajiib ah si ay u booqdaan in Europe. Magaalo iyo waddo kastaa waxay leedahay dabeecad iyo soo jiidasho u gaar ah. Firfircoon, waxaa ka buuxa kafateeriyaal waaweyn, yaalaaan, fanka wadada, meelo farshaxan casri ah, iyo bey'ada-saaxiibtinimo, haddii aadan kuwan ahayn 12 xaafadaha ugu qabow Yurub, halkan waxaa ku yaal dhowr sababood oo aad u liqi karto liiska baaldi.
1. Xaafadaha Ugu Qabow Yurub: Neukolln, Berlin
Ka fog kan ugu weyn soo jiidashada dalxiiska ee Berlin, xaafadda Neukolln waa machad keligiis ah. Xaafadda qabow waa isku dhafka hore iyo kan cusub, dhaqamada, reer -magaalnimada, iyo meelaha cagaaran ee madadaalada.
Kababs, meelo lagu daawado farshaxanka, baararka dusha sare agagaarka jardiinooyinka cagaaran waxay ka dhigtaa xaafadda Neukolln mid ka mid ah kuwa ugu qabow Yurub. Ka dib maalin weyn oo dibedda ah Tempelhofer Feld weyn, ama beerta Britzer waxaad ku sii wadan kartaa tuulada Richardplatz ee aan fiicnayn ama baarkinka baabuurta ee Klunkeranich oo loo rogay baarka saqafka.
Jardiinooyinka cagaaran, jardiinooyin beer leh oo leh aragtiyo webi, casriga ah madxafka farshaxanka waa uun qaar ka mid ah dhagaxyada qarsoon xaafadda Holesovice ee ugu qabow Prague. Holesovice waxay hoy u tahay fanaaniinta Czech iyo qoysaska dhalinyarada ah, iyaga oo ku qaadanaya firaaqadooda Letna Park kuna cunaya bistro badan oo ku xeeran.
Aaggii hore ee warshadaha ee Prague ayaa maanta isu beddelay meel hal -abuur leh oo loogu talagalay naqshadeeyayaasha iyo maskaxda hal -abuurka leh. Sidaas, ma aha wax lala yaabo in mid ka mid ah xaafadaha ugu qabow ee Yurub ay leedahay kafateeryo qallafsan, dukaamada naqshadaynta, iyo xarumaha farshaxanka.
3. Xaafadaha Ugu Qabow Yurub: Ostiense, Rome
Ostiense ma aha xaafadda caadiga ah ee Talyaaniga, laakiin taasi waa dhab ahaan waxa ku dhejinaya 10 xaafadaha ugu qabow Yurub. A warshaddii hore waxay isu beddeshay madxaf farshaxan, farshaxanka dariiqa halkii ilaha, makhaayadaha casriga ah, iyo 1 qabuuraha aan kaatooliga ahayn ee abwaaniinta jaceylka ah Keats iyo Shelley ay heleen meel ay seexdaan weligeed Ostiense waa sida dabool kale.
Bartii cawlanayd ee caasimaddii Talyaaniga wax yar bay isu beddeshay meel midabyo iyo hal -abuur muuqda leh. Waxaa intaa dheer, halkan waxaad booqan kartaa Ahraamta aan caadiga ahayn ee Caius Cestius oo aad u bogi kartaa frescos -keeda, markaad u socoto Eataly si aad u hesho cunto Talyaani ah. Haddii aad jeceshahay inaad u noolaato sida deegaanka, hoyga ku yaal Ostiense oo aad u jaban ayaa aad uga jaban degmooyinka dalxiiska ee dadku ku badan yihiin ee Rome.
4. Xaafada South Pigalle Paris
Socodka hoos SoPi, ilaa Rue des Shuhadada, guriga in ka badan 200 kafateeriyada, chocolatiers, iyo baararka, Koonfurta Pigalle waa meesha ku taal Paris. Waxaa intaa dheer in Koonfurta Pigalle ay tahay jannada cunnada, xaafadda qabow waa meesha aad ka ogaan karto matxafyada iyo farshaxanka cajiibka ah. Mid ka mid ah matxafyada ugu gaarka ah waa madxafka Nolosha Jaceylka. Musee de La Vie Romantique waxaad ku ballaarin kartaa aqoontaada ku saabsan xilliga jaceylka ee taariikhda Faransiiska.
Si looga nasto nolosha wanaagsan, waxaad aadi kartaa maxkamadda kubbadda kolayga ee midabka leh ee Pigalle. Garoonka kubbadda kolayga ee Pigalle waa la dayactiray, loogu talagalay midabyo cad, ilaa ciyaarta kubbadda koleyga ee ugu wanaagsan. Paris waa mid aad u weyn meel fasax ah oo ka mid ah kuwa ugu badan goobaha fasaxa fantastik ah oo leh maxkamadaha kubbadda koleyga ee Yurub.
5. Xaafadaha Ugu Qabow Yurub: Arbat, Moscow
Xaafadda Arbat ee midabka leh oo xiisaha badan waa hawo neef leh oo ku taal badhtamaha magaalada Moscow ee dadku ku badan yihiin. Waxaad ka heli doontaa Arbat soo jiidasho leh, leh dhismayaasha midabada leh, kafateeriyada, iyo farshaxanka waddooyinka. Markaad ku socoto Arbat, waxaad ogaan doontaa nafta magaalada guud ahaan. Wadada caanka ah ee Old Arbat waxay ku taal Quarter -ka taariikhiga ah ee Moscow waxay ilaalisay muhiimaddeeda xarun ganacsi, laga soo bilaabo qarnigii 15aad.
maalmahan, xaafadda Arbat waxaa ka buuxa boutiques chic, dukaamada xusuusta, farsamada gacanta, iyo khasnado kale oo badan. Intaa waxaa dheer, halka aaggan uu yahay mid aad u dalxiis badan, waxaad ka heli doontaa dib u dhac, iyo muuqaal ahaan. Si aad ugu raaxaysato arbaca ugu fiican, hoos u dhig dhawr maalmood safarkaaga Moscow, ugu yaraan. Sidan, waxaad sahamin kartaa kan ugu fiican Moscow iyo quruxda mid ka mid ah meelaha ugu yaabka badan ee lagu booqdo Ruushka.
6. 7th Degmada Budapest
Dhalinyaro iyo madadaalo, Degmada 7 -aad ee Budapest waa dhul -gariir loogu talagalay dadka socotada ah. Baararka waaweyn, qolalka baxsadka ugu fiican ee Budapest, suuq fiid ah, iyo dhacdooyinka dhaqanka, xaafaddan ayaa mar walba guuxaysa, hab wanaagsan. Xaafaddan qabow sidoo kale waa xaafadda Yuhuudda ee Budapest, si aad sidoo kale u booqan karto sunagogga weyn, astaan ​​u gaar ah.
Waxaa intaa dheer, jidadkii hore waxay noqdeen dhul bacrin ah oo dib loogu soo nooleeyo dhaqanka Hangari. Waxaa intaa dheer maqaayadaha iyo dukaamada, soo jiidashada ugu weyn ee 7degmadu waa baararka burburka. U dabaal degaya arooska saaxiibkaa ugu fiican, ama bash -dhalashada ee baarka qadiimiga ah waa waayo -aragnimo gaar ah oo kaliya xaafadda ugu qabow Budapest.
7. Xaafadaha Ugu Qabow Yurub: Langstrasse Zurich
Loo tarjumay sida waddada ugu dheer, xaafadda Langstrasse ee Zurich waxay jebisaa wax kasta oo aad ka taqaanno waddanka waqtiga ilaaliya. Langstrasse waa wiilka xun ee Zurich, misigta, adventurous, leh nalal neon dhalaalaya oo had iyo jeer diyaar u ah xaflad. Langtrasse wuxuu leeyahay agoobaha cuntada, baararka, iyo naadiyada loogu talo galay in lagu caweeyo, kaliya qaado.
Waxaa intaa dheer, xaafadda ugu qabow waa mid ka mid ah meelaha ugu saaxiibada badan LGBT ee Yurub. Halkaan waxaad ka heli kartaa jeex-jeexaaga barxadda Les Garcons-saaxiibtinimo ee LGBT/pizza, tusaale ahaan. Si aad u soo gabagabeyn, xaafaddan cajiibka ah marar dhif ah ma seexato oo waxay kuugu adeegi doontaa makhaayado badan oo qowmiyadeed, xisbiyada, iyo xafladaha dabcan.
Ku Xidhan Zurich Tareen
Bern ilaa Zurich Tareen
8. Waqooyiga Amsterdam
Goobaha cagaaran ee ballaaran, naqshadaha u qurux badan, iyo tuulada yar ee soo jiidashada leh, Amsterdam-Noord ayaa wada heshay. Xaafadda qabow waxay ku taal meel ka durugsan Wabiga IJ, sidaa darteed Noords waxay bixisaa wax la yaab leh baro tamashle iyo heesaha tooska ah ee muusikada. Intaas oo dhan oo soo jiidasho leh ka sokow, Amsterdam-Noord waxay hoy u tahay qulqulka ugu sarreeya Yurub, loogu talagalay dadka jecel adrenaline.
Si kastaba ha ahaatee, haddii aad qorshaynayso in ka badan fasax firfircoon markaas webiga ayaa ku habboon hawlaha bannaanka. Baaskiil wadista, orodka, iyo xataa doon -doon, Webiga IJ waa kaamil. Qeybta ugu hooseysa ayaa ah in Amsterdam-Noord ay tahay duni yar oo Dutch ah gudaha magaalada quruxda badan ee Amsterdam. Fursadaha waa kuwo aan dhammaad lahayn, jawiguna waa cajiib, lama yaabin dadka socotada ah oo ku soo laabanaya mid ka mid ah xaafadaha ugu qabow Yurub.
9. Xaafadaha Ugu Qabow Yurub: Shoreditch London
Socotada badidoodu way yaqaaniin Shoreditch mahadsanid suuqa cajiibka ah ee Brick Lane. Si kastaba ha ahaatee, Shoreditch waa meesha ugu wanaagsan ee lagu aadi karo wax-iibsi si aad u hesho qaybo hal-nooc ah oo ka mid ah dukaamada waaweyn ee madaxa bannaan. Kani waa hal tusaale oo ah dhinacyada u gaarka ah xaafadda lagu xardhay sawirka. Shoreditch waxaa laga yaabaa inuusan ahayn sawir-kaamil ah, laakiin hubaal waxay leedahay naf u gaar ah.
Si sax ah sababta oo ah Shoreditch ma aha xaafadda Ingiriisiga caadiga ah, waxay hoy u noqotay fanaaniinta deegaanka. Intaa waxaa dheer, xaafaddan magaaladu waa meesha ugu fiican ee lagu tijaabiyo cuntada dariiqa ee suuqa ama pop-up-ka, filim ka qaado shineemada saqafka sare ka raadi farshaxanka gidaarka qarsoon ee geeska ku yaal. Si aad u soo gabagabeyn, Dabeecadda gaarka ah ee Shoreditch ayaa ka dhigaysa xaafadda ugu qabow London.
Xeebta quruxda badan ee Scottish -ka oo leh aragtida badweynta Atlantic, Findhorn waa sixir. Halka uu ku yaal Morayshire, qaarkood waxay ku tilmaamaan degsiimo, halkii ay ka ahaan lahayd xaafad marka loo eego magaalada. Findhorn waa goob fasax oo cajiib ah, gaar ahaan meel loo dalxiis tago oo xeebta ah. halkan, waxaad ka heli doontaa fursado waaweyn madadaalada biyaha ama ku raaxaysiga xeebta.
Waxaa intaa dheer, Findhorn waxay leedahay tuulo-deegaan la yaab leh, iyo safarka madadaalada waa mid aad u casri ah maalmahan. Dhinacan cagaaran wuxuu ku darayaa xasiloonida aagga nasashada, oo ay weheliyaan muuqaalka iyo jawiga weyn.
11. Xaafadaha Ugu Qabow Yurub: Vesterbro, Copenhagen
Qof kasta oo jooga Vesterbro wuxuu dhihi doonaa xaafaddan qabow waxay ku leedahay dhowr xaafadood oo aad u kala duwan. Mid waa dhalinyaro, sasabasho leh, iyo mar degmada Kobanheegan ee nalalka gaduudka ah iyo tan kale oo ay ka heysato madadaalo Faransiis ah. Vesterbro waxaa ka buuxa isbarbardhig, sidaa darteed qof kasta oo booqda Kobanheegan markii ugu horraysay wuxuu ka heli doonaa wax aad u wanaagsan oo ay jecel yihiin.
In si kale loo dhigo, Vesterbro waa mid ka mid ah xaafadaha ugu qabow Yurub sababtoo ah waxay leedahay wax la yaab leh oo qof walba loogu deeqo. Laga soo bilaabo meelaha cagaaran ilaa maqaayado fiican, boutiques qurux badan, iyo guriga beesha Absalomlon oo aad kula cuni karto dadka deegaanka, Bulshada Vesterbro waa mid aad u soo dhaweyn leh oo fudud. Sidaa darteed, layaabna ma leh in Vestrbro uu ugu sarreeyo 10 xaafadaha ugu qabow Yurub sanad walba.
Xaafadda ugu moodada badan Milan, Porta Venezia waxay martigalisaa Toddobaadka Fashion -ka Milan waxayna ku xirtaa meel sare 12 xaafadaha ugu qabow Yurub. Art, Cuntada Talyaaniga, agagaarka geeska meelaha ugu wanaagsan ee laga dukaameysto ee Milan, haddana dib-u-dhigay Porta Venezia waa Talyaani yar, ka fog xarunta dalxiiska ee dadku ku badan yihiin.
Port Venezia waxay ku faantaa qolal farshaxan oo loo rogay fiilayaal, kafateeriyada, iyo beero, sida Giardini Publici oo cajiib ah. Jawiga weyn ee Porta Venezia wuxuu soo jiitaa dadka deegaanka, musaafuriyay, iyo dadka safarka ah si ay u caweeyaan, dhexgalo, iyo xaflad inta lagu guda jiro bandhigga Milan Gay, iyo maalin kasta ilaa markaas. Sidaas, haddii aad qorshaynayso a sabtida iyo axada ee Milan, si fiican u samee muddo toddobaad ah, ugu yaraan.
Waxaan ku Save A tareenka waxay ku farxi doontaa inay kaa caawiso qorsheynta safarka aad 12 xaafadaha ugu qabow Yurub.
Miyaad rabtaa inaad ku dhejiso dhejiskayaga baloogga “12 Xaafadaha ugu Qabow Yurub” bartaada? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Fcoolest-neighborhoods-europe%2F - (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
cool coolestneighborhoodsEurope CoolNeighborhoods misigta Neighborhoods Trendyneighborhoodseurope